အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသတ်နည်းများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လူမှုစကားပြောသင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသတ်နည်းများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လူမှုစကားပြောသင်ခန်းစာ)
Posted by Language Republic on July 7, 2014 at 11:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနေရာမှ ကိုယ့်ဖက်မှပြောတာကို စကားစဖြတ် အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာ တခါတလေ တော်တော်လေးခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ရဲ့ စကားဖြတ်ဖို့ပေးတဲ့ အကြောင်းပြချက်အမှန်တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို မြင်နေရလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘတ်(စ)ကား (သို့) စတိုးဆိုင်ထဲမှာ စကားပြောနေတာဆိုရင်တော့ "ထမင်းစားချိန်ရောက်နေလို့ပါ" ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးပေးတာက အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားပြောတာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးနဲ့သာ အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုအဆုံးသတ်နိုင်စေမဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကတော့ -
"It has been really nice talking to you." (ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောခဲ့ရတာ တကယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။) သို့မဟုတ်
"It was nice meeting you." (ခင်ဗျားနဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး သင့်ကို တစ်ဖက်က စကားပြောဖော်ကပြောလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့က "Thanks, I enjoyed it too." (ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။) လို့ ပြန်ပြောပြီး စကားကို အဆုံးသတ်ပြီး ကိုယ်လမ်း ကိုယ်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ စကားပြောတာပြီးသွားလို့ပဲ။
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ စကားပြောတာကို အဆုံးသတ်တဲ့အခါ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု (သို့) နောက်ထပ်သွားစရာရှိသေးတဲ့နေရာကို ဖေါ်ပြပြီးတော့လည်း ထပ်ဖြည့် ပြောနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ နမူနာတစ်ခုရေးပြထားပါတယ်။
“You’ll have to excuse me, I spotted my friend across the room and I want to make sure I say hello / ask heraquestion. It’s been really nice talking with you. Haveagreat night.”
(ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး၊ အခန်းရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းမှာ သူငယ်ချင်းကို တွေ့လိုက်လို့” သူ့ကို သေချာပေါက် သွားနှုတ်ဆက်ရဦးမယ် / မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။ ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောခဲ့ရတာ တကယ့်ကို ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်စရာ ညချမ်းဖြစ်ပါစေ။)
ပြောလက်စ စကားအဆုံးသတ်ရန် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းပြချက်တချို့ကတော့ -
You need to step outside to makeaphone call. (အပြင်ထွက်ပြီး ဖုန်းဆက်ဖို့လိုတယ်။)
You need to get another drink. (အရက်နောက်တစ်ခွက် သွားယူဖို့လိုတယ်။)
You need to visit the bathroom. (သန့်စင်ခန်းသွားဖို့လိုတယ်)
You need to ask so-and-soaquestion. (တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မေးစရာရှိနေတယ်။)
ပိုပြီး အကျပ်အတည်းဖြစ်နေရင် အများဆုံးပုံမှန်သုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကတော့ -
“I need to excuse myself foramoment” (ကျွန်တော့်ကို ခဏလောက်တော့ ခွင့်ပြုကြပါဦး။) သို့မဟုတ်
“Please excuse me.” (တဆိတ်လောက်ခွင့်ပြုပါဦး) ကတော့ အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ စကားဝိုင်းကို နောက်တကျော့ ပြန်လှည့်လာဖို့ စိတ်ကူးရှိရင်တော့ “Maybe I’ll run into you later.” (နောက်ခင်ဗျားနဲ့ ဆုံဦးမှာပါ။) (သို့) “Maybe we can pick up this discussion later.” (ဒီဆွေးနွေးချက်ကို နောက်မှ ထပ်ပြောကြတာပေါ့။”) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပါ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်က စေတနာ မုသားလေး (a white lie) ဖြစ်နေရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ တကယ်ပဲ သန့်စင်ခန်းကိုသွားဖို့ မလိုပေမဲ့လည်း သွားသာသွားလိုက်ပါ။ သွားပြီး လက်ဆေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို စုစည်းပြီး ပြန်ထွက် လာခဲ့ပါ။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ စကားပြောဖေါ်အသစ်ကို သာရှာပါ။
“ခွင့်ပြုပါဦး” လို့ပြောတဲ့အခါမှာ သွားဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းနေတာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အသိပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “So nice talking with you! I need to excuse myself. If I don’t talk to you later, enjoy the party.” (ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောခဲ့ရတာကို ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး၊ နောက်ထပ်စကား မပြောဖြစ်ရင်လည်း ပါတီကို ပျော်ပျော်သာ ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။) လို့ ပြောပြီး လျှောက်ထွက်သွားပါ။
အဲဒီလူက အရိပ်အခြေကို နားမလည်ရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး စကားကို ဖြတ်ရမှာပဲ။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ “I'm sorry to cut you off, but I need to step away foramoment. Maybe we’ll pick this up later!” (စကားဖြတ်ရတာ အားနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သွားရလိမ့်မယ်။ နောက်မှာ ဒီအကြောင်း ပြန်ကောက်ကြတာပေါ့။) လို့ ပြောပြီး ထွက်သွားရုံပဲရှိပါတယ်။
အကယ်၍ အလိုက်မသိတဲ့ ဒီလူနဲ့ ထပ်ဆုံနေရင်တော့ သွယ်ဝိုက်မနေတော့ပဲ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ တဲ့တိုးသာ ပြောလိုက်ပါ။
ပြောနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ “I’m so sorry. I’ve enjoyed talking with you, but I also want to make sure I catch up with X, Y and Z person. Please excuse me.” (ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ အားတော့နာပေမဲ့ ကျွန်တော် X တို့ Y တို့ Z တို့ ကို အမီသွားတွေ့ရဦးမယ်။) လို့ပြောပြီး အဲဒီနေရာက ထွက်သွားပါ။
သင်က စကားကို အဆုံးသတ်ပြီး ဖြတ်ခဲ့တာတောင်မှ သူကအတင်းလိုက်ပြောနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ သင့်ကို အားမနာတမ်းတဲ့တိုးပြောဖို့ ခွင့်ပြုနေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
“I’m sorry to cut you off, but I’m going to talk to X and Y now. I’ll see you next time maybe.”
(စကားဖြတ်ပစ်ရတာ အားနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျွန်တော် X နဲ့ Y တို့နဲ့ စကားသွားပြောတော့မယ်။ နောက်တစ်ခါ တွေ့ကောင်းတွေ့ကြသေးတာပေါ့။) လို့ပြော၍ ပဲဖြစ်ဖြစ်
“It’s great seeing you again, but I really want to circulateabit and talk to some other people. Maybe catch you next time."
(ခင်ဗျားနဲ့ ပြန်ဆုံရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လှည့်ပတ်ပြီး အခြားသူတွေ့နဲ့လည်း စကားပြောချင်သေးတယ်။ နောက်မှ ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။) လို့ ပြော၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီး ထွက်သွားပါ။
လက်ဟန်ခြေဟန်ပြတာကလည်း ပြောလက်စ စကားကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့် နာရီကို ခဏခဏကြည့်တာမျိုး (သို့) လွယ်အိတ်ကို တပြင်ပြင်နဲ့ လွယ်ပြတာမျိုး လုပ်ပြပါ။ ဒါတွေက မထိရောက်ဖူးဆိုရင် မေးခွန်းထပ်မမေးပါနဲ့တော့။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း သမရိုးကျနည်းဖြစ်တဲ့ "I'd better let you go." (ခင်ဗျားကိုတော့ ပေးပြန်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။) လို့ပြောပြီး စကားဖြတ်တာက တစ်ဖက်လူကိုလည်း အပြုံးလေးနဲ့ ထွက်ခွာသွားဖို့ အခွင့်အရေးပေးတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဖုန်းစကားပြောခြင်းကို အဆုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း (Endingaphone conversation)
ဖုန်းစကားပြောတာကို အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့ အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်သလို လုပ်ကြံပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တဖက်သား ယုံရလောက်တဲ့အကြောင်း ပြချက်တော့ဖြစ်ရမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ပါလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကိုတော့ ရှောင်ပါ။
"I talked way too long yesterday." (မနေ့က ငါအကြာကြီး စကားတွေ ပြောခဲ့တယ်။)
"I'm way behind on laundry." (အ၀တ်လျှော်စရာတွေ အများကြီး စုပုံနေတယ်။)
"I need to study." (စာကျက်ရဦးမယ်။)
"I need some quiet time." (အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်။)
"I need to get ready for my big day." (ကျွန်မရဲ့နေ့ကြီးအခါကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ရဦးမယ်။)
"I'm walking the dog." (ခွေးကျောင်းနေတယ်။)
"I'm need to exercise ." (လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရဦးမယ်။)
"My ear hurts." (နားကိုက်နေတယ်။)
"Someone else wants to use the phone." (နောက်တစ်ယောက်က ဖုန်းသုံးချင်လို့။)
"I need to use the bathroom." (သန့်စင်ခန်းသွားဖို့ လိုတယ်။)
တစ်ဖက်လူယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို စဉ်းစားပြီးရင်တော့ စကားဖြတ်ဖို့ သင့်တော်မဲ့အချိန်ကို စောင့်ပါ။ နည်းကောင်းတစ်ခုကတော့ စကားပြောတာ ခဏအဆက်ပြတ်တဲ့အချိန်ကို စောင့်ပါ။ အဲဒီလိုအချိန် ရောက်တာနဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ပေးပြီး စကားကို ဖြတ်လိုက်ပါ။ စိတ်ရှည်ဖို့တော့ လိုတယ်နော်။ တစ်ဖက်လူက စကားပြောနေတုန်းကို နှောက်ယှက်တာ ၊ ဟိန်းဟောက်တာ၊ ညည်းတာ၊ သက်ပြင်းကျယ်ကျယ်ချတာတွေဟာ တစ်ဖက်သားကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ်စဉ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ပြောပြီးတာနဲ့ စကားဖြတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် တောင်းပန်လိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ထိုသူနဲ့ နောက်တစ်ခါ စကားပြောဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် ဖုန်းပြောနိုင်မဲ့ အချိန်ကိုပါ စီစဉ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ ဖုန်းကို ချလိုက်ပါ။
ဥပမာ - “I'm really sorry, but I have to go, it's dinner time. I'll call you tomorrow, OK? (Pause) Bye!” (တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညစာစားချိန်ဖြစ်လို့ အခုသွားရတော့မယ်။ မနက်ဖြန်မှ ဖုံးပြန် ဆက်လိုက်မယ်လေ။ ရတယ်မဟုတ်လား? (ခဏစောင့်ပါ) ဒါပဲနော်!) လို့ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ ဝါကျတွေကိုသုံးပြီး နဲနဲပါးပါးလေ့ကျင့်မှုသာလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူချင်းတွေ့ပြီးပြောနေတာ၊ ဖုန်းစကားပြောတာတွေကို ယဉ်ကျေးအဆင်ပြေစွာ အဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Captainawkward.com မှ Jennifer P ၏ Gracefully Exiting from Conversations ၊ Englishtown.com မှ Polite Ways to EndaConversation in English နှင့် Instructables.com မှ iMac ၏ How to Politely EndaConversation တို့မှ မှီငြမ်းဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတဈဦးတဈယောကျနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျစကားပွောနရောမှ ကိုယျ့ဖကျမှပွောတာကို စကားစဖွတျ အဆုံးသတျဖို့ဆိုတာ တခါတလေ တျောတျောလေးခကျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တဈဖကျလူက ကိုယျ့ရဲ့ စကားဖွတျဖို့ပေးတဲ့ အကွောငျးပွခကျြအမှနျတကယျ ဟုတျမဟုတျဆိုတာကို မွငျနရေလို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘတျ(စ)ကား (သို့) စတိုးဆိုငျထဲမှာ စကားပွောနတောဆိုရငျတော့ "ထမငျးစားခြိနျရောကျနလေို့ပါ" ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြမြိုးပေးတာက အခညျြးနှီးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စကားပွောတာကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ယဉျယဉျကြေးကြေးလေးနဲ့သာ အဆုံးသတျလိုကျပါ။ ဒီလိုအဆုံးသတျနိုငျစမေဲ့ အသုံးအနှုနျးတှကေတော့ -
"It has been really nice talking to you." (ခငျဗြားနဲ့စကားပွောခဲ့ရတာ တကယျဝမျးသာတယျဗြာ။) သို့မဟုတျ
"It was nice meeting you." (ခငျဗြားနဲ့ တှရေ့တာ ဝမျးသာတယျဗြာ။) တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး သငျ့ကို တဈဖကျက စကားပွောဖျောကပွောလာပွီဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့က "Thanks, I enjoyed it too." (ကြေးဇူးပါဗြာ၊ ကြှနျတျောလညျး ဝမျးသာပါတယျ။) လို့ ပွနျပွောပွီး စကားကို အဆုံးသတျပွီး ကိုယျလမျး ကိုယျသှားရုံပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ စကားပွောတာပွီးသှားလို့ပဲ။
အထကျကပွောခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ စကားပွောတာကို အဆုံးသတျတဲ့အခါ အကွောငျးပွခကျြတဈခုခု (သို့) နောကျထပျသှားစရာရှိသေးတဲ့နရောကို ဖျေါပွပွီးတော့လညျး ထပျဖွညျ့ ပွောနိုငျပါတယျ။ အောကျမှာ နမူနာတဈခုရေးပွထားပါတယျ။
(ကြှနျတေျာ့ကို ခှငျ့ပွုပါဦး၊ အခနျးရဲ့ဟိုဘကျခွမျးမှာ သူငယျခငျြးကို တှလေို့ကျလို့” သူ့ကို သခြောပေါကျ သှားနှုတျဆကျရဦးမယျ / မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။ ခငျဗြားနဲ့ စကားပွောခဲ့ရတာ တကယျ့ကို ဝမျးသာတယျဗြာ။ ပြျောရှငျစရာ ညခမျြးဖွဈပါစေ။)
ပွောလကျစ စကားအဆုံးသတျရနျ ဖွဈနိုငျတဲ့ အခွားအကွောငျးပွခကျြတခြို့ကတော့ -
You need to step outside to makeaphone call. (အပွငျထှကျပွီး ဖုနျးဆကျဖို့လိုတယျ။)
You need to get another drink. (အရကျနောကျတဈခှကျ သှားယူဖို့လိုတယျ။)
You need to visit the bathroom. (သနျ့စငျခနျးသှားဖို့လိုတယျ)
You need to ask so-and-soaquestion. (တဈစုံတဈယောကျကို မေးစရာရှိနတေယျ။)
ပိုပွီး အကပျြအတညျးဖွဈနရေငျ အမြားဆုံးပုံမှနျသုံးတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှကေတော့ -
“I need to excuse myself foramoment” (ကြှနျတေျာ့ကို ခဏလောကျတော့ ခှငျ့ပွုကွပါဦး။) သို့မဟုတျ
“Please excuse me.” (တဆိတျလောကျခှငျ့ပွုပါဦး) ကတော့ အဆငျပွဆေုံး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
တကယျလို့ စကားဝိုငျးကို နောကျတကြော့ ပွနျလှညျ့လာဖို့ စိတျကူးရှိရငျတော့ “Maybe I’ll run into you later.” (နောကျခငျဗြားနဲ့ ဆုံဦးမှာပါ။) (သို့) “Maybe we can pick up this discussion later.” (ဒီဆှေးနှေးခကျြကို နောကျမှ ထပျပွောကွတာပေါ့။”) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးတှကေိုပါ တှဲသုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အကွောငျးပွခကျြက စတေနာ မုသားလေး (a white lie) ဖွဈနရေငျလညျး စိတျမပူပါနဲ့။ တကယျပဲ သနျ့စငျခနျးကိုသှားဖို့ မလိုပမေဲ့လညျး သှားသာသှားလိုကျပါ။ သှားပွီး လကျဆေးရငျးနဲ့ ကိုယျ့စိတျကို စုစညျးပွီး ပွနျထှကျ လာခဲ့ပါ။ အဲဒီအခါကရြငျတော့ စကားပွောဖျေါအသဈကို သာရှာပါ။
“ခှငျ့ပွုပါဦး” လို့ပွောတဲ့အခါမှာ သှားဖို့ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးနတောမဟုတျပါ။ ကိုယျသှားမယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို အသိပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ “So nice talking with you! I need to excuse myself. If I don’t talk to you later, enjoy the party.” (ခငျဗြားနဲ့စကားပွောခဲ့ရတာကို ဝမျးသာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ခှငျ့ပွုပါဦး၊ နောကျထပျစကား မပွောဖွဈရငျလညျး ပါတီကို ပြျောပြျောသာ ဆငျနှဲလိုကျပါ။) လို့ ပွောပွီး လြှောကျထှကျသှားပါ။
အဲဒီလူက အရိပျအခွကေို နားမလညျရငျတော့ ဒီထကျပိုပွီး စကားကို ဖွတျရမှာပဲ။ ဒီလိုအခါမြိုးမှာ “I'm sorry to cut you off, but I need to step away foramoment. Maybe we’ll pick this up later!” (စကားဖွတျရတာ အားနာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောကတော့ သှားရလိမျ့မယျ။ နောကျမှာ ဒီအကွောငျး ပွနျကောကျကွတာပေါ့။) လို့ ပွောပွီး ထှကျသှားရုံပဲရှိပါတယျ။
အကယျ၍ အလိုကျမသိတဲ့ ဒီလူနဲ့ ထပျဆုံနရေငျတော့ သှယျဝိုကျမနတေော့ပဲ ပွတျပွတျသားသားနဲ့ တဲ့တိုးသာ ပွောလိုကျပါ။
ပွောနိုငျတဲ့ အသုံးအနှုနျးကတော့ “I’m so sorry. I’ve enjoyed talking with you, but I also want to make sure I catch up with X, Y and Z person. Please excuse me.” (ခငျဗြားနဲ့စကားပွောရတာ ဝမျးသာပါတယျ။ အားတော့နာပမေဲ့ ကြှနျတျော X တို့ Y တို့ Z တို့ ကို အမီသှားတှရေ့ဦးမယျ။) လို့ပွောပွီး အဲဒီနရောက ထှကျသှားပါ။
သငျက စကားကို အဆုံးသတျပွီး ဖွတျခဲ့တာတောငျမှ သူကအတငျးလျိုကျပွောနဦေးမယျဆိုရငျတော့ သူ့အနနေဲ့ သငျ့ကို အားမနာတမျးတဲ့တိုးပွောဖို့ ခှငျ့ပွုနသေလို ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့
(စကားဖွတျပဈရတာ အားနာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုကြှနျတျော X နဲ့ Y တို့နဲ့ စကားသှားပွောတော့မယျ။ နောကျတဈခါ တှကေ့ောငျးတှကွေ့သေးတာပေါ့။) လို့ပွော၍ ပဲဖွဈဖွဈ
(ခငျဗြားနဲ့ ပွနျဆုံရတာ ဝမျးသာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောလှညျ့ပတျပွီး အခွားသူတှနေဲ့လညျး စကားပွောခငျြသေးတယျ။ နောကျမှ ပွနျတှကွေ့တာပေါ့။) လို့ ပွော၍ပဲ ဖွဈဖွဈပွောပွီး ထှကျသှားပါ။
လကျဟနျခွဟေနျပွတာကလညျး ပွောလကျစ စကားကို ယဉျကြေးစှာ အဆုံးသတျဖို့ နညျးလမျးတဈခုပါပဲ။ ဥပမာအားဖွငျ့ နာရီကို ခဏခဏကွညျ့တာမြိုး (သို့) လှယျအိတျကို တပွငျပွငျနဲ့ လှယျပွတာမြိုး လုပျပွပါ။ ဒါတှကေ မထိရောကျဖူးဆိုရငျ မေးခှနျးထပျမမေးပါနဲ့တော့။ တဈခါတဈရံကတြော့လညျး သမရိုးကနြညျးဖွဈတဲ့ "I'd better let you go." (ခငျဗြားကိုတော့ ပေးပွနျမှဖွဈမယျထငျတယျ။) လို့ပွောပွီး စကားဖွတျတာက တဈဖကျလူကိုလညျး အပွုံးလေးနဲ့ ထှကျခှာသှားဖို့ အခှငျ့အရေးပေးတဲ့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုပါပဲ။
ဖုနျးစကားပွောခွငျးကို အဆုံးသတျဖွတျခွငျး (Endingaphone conversation)
ဖုနျးစကားပွောတာကို အဆုံးသတျဖို့ဆိုရငျ ခိုငျမာတဲ့ အကွောငျးပွခကျြရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအကွောငျးပွခကျြကတော့ အမှနျလညျးဖွဈနိုငျသလို လုပျကွံပွောတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဖကျသား ယုံရလောကျတဲ့အကွောငျး ပွခကျြတော့ဖွဈရမယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ အောကျပါလကျခံနိုငျစရာမရှိတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှကေိုတော့ ရှောငျပါ။
"I talked way too long yesterday." (မနကေ့ ငါအကွာကွီး စကားတှေ ပွောခဲ့တယျ။)
"I'm way behind on laundry." (အဝတျလြှျောစရာတှေ အမြားကွီး စုပုံနတေယျ။)
"I need to study." (စာကကျြရဦးမယျ။)
"I need some quiet time." (အေးအေးဆေးဆေးနခေငျြတယျ။)
"I need to get ready for my big day." (ကြှနျမရဲ့နကွေီ့းအခါကွီးအတှကျ ပွငျဆငျရဦးမယျ။)
"I'm walking the dog." (ခှေးကြောငျးနတေယျ။)
"I'm need to exercise ." (လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရဦးမယျ။)
"My ear hurts." (နားကိုကျနတေယျ။)
"Someone else wants to use the phone." (နောကျတဈယောကျက ဖုနျးသုံးခငျြလို့။)
"I need to use the bathroom." (သနျ့စငျခနျးသှားဖို့ လိုတယျ။)
တဈဖကျလူယုံကွညျနိုငျလောကျတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို စဉျးစားပွီးရငျတော့ စကားဖွတျဖို့ သငျ့တျောမဲ့အခြိနျကို စောငျ့ပါ။ နညျးကောငျးတဈခုကတော့ စကားပွောတာ ခဏအဆကျပွတျတဲ့အခြိနျကို စောငျ့ပါ။ အဲဒီလိုအခြိနျ ရောကျတာနဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို ပေးပွီး စကားကို ဖွတျလိုကျပါ။ စိတျရှညျဖို့တော့ လိုတယျနျော။ တဈဖကျလူက စကားပွောနတေုနျးကို နှောကျယှကျတာ ၊ ဟိနျးဟောကျတာ၊ ညညျးတာ၊ သကျပွငျးကယျြကယျြခတြာတှဟော တဈဖကျသားကို စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစပေါတယျ။
ကိုယျစဉျးစားထားတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို ပွောပွီးတာနဲ့ စကားဖွတျလိုကျရတဲ့အတှကျ တောငျးပနျလိုကျပါ။ ဒါ့အပွငျ ထိုသူနဲ့ နောကျတဈခါ စကားပွောဖို့ ရညျရှယျတယျဆိုရငျတော့ နောကျတဈကွိမျ ဖုနျးပွောနိုငျမဲ့ အခြိနျကိုပါ စီစဉျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ နှုတျဆကျပွီးတော့ ဖုနျးကို ခလြိုကျပါ။
ဥပမာ - “I'm really sorry, but I have to go, it's dinner time. I'll call you tomorrow, OK? (Pause) Bye!” (တကယျပဲတောငျးပနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ညစာစားခြိနျဖွဈလို့ အခုသှားရတော့မယျ။ မနကျဖွနျမှ ဖုံးပွနျ ဆကျလိုကျမယျလေ။ ရတယျမဟုတျလား? (ခဏစောငျ့ပါ) ဒါပဲနျော!) လို့ပွောပွီး ဖုနျးခလြိုကျနိုငျပါတယျ။
ဒီသငျခနျးစာမှာပါတဲ့ ဝါကတြှကေိုသုံးပွီး နဲနဲပါးပါးလကေ့ငျြ့မှုသာလုပျထားမယျဆိုရငျတော့ ဘယျအခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ လူခငျြးတှပွေီ့းပွောနတော၊ ဖုနျးစကားပွောတာတှကေို ယဉျကြေးအဆငျပွစှော အဆုံးသတျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Captainawkward.com မှ Jennifer P ၏ Gracefully Exiting from Conversations ၊ Englishtown.com မှ Polite Ways to EndaConversation in English နှငျ့ Instructables.com မှ iMac ၏ How to Politely EndaConversation တို့မှ မှီငွမျးဘာသာပွနျဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by CHIT THU on July 8, 2014 at 13:17
Permalink Reply by Zin Mar Aye on July 8, 2014 at 20:13
Permalink Reply by Aung Myint Thein on July 9, 2014 at 10:57
Permalink Reply by Aung Myint Thein on July 9, 2014 at 10:55
Permalink Reply by mayzinthin on July 26, 2014 at 21:25
Permalink Reply by U Aung Kyaw on January 7, 2015 at 16:00
It gives me so much knowledge that I thank you very much.
Permalink Reply by houng ning on September 29, 2015 at 15:20